SomaliTalk.com » muxaadaro
Home » Qoraallada Halkudhegga "muxaadaro"
Muhiimada Cilmiga iyo Culimada: Sh. Maxamed Shaafici
Waxaa inoo Socda Muxaadarooyinkii aan ugu magacdaray “Diintu Waa nasteexo iyo Dhidibaynta dacwada” Sh. Maxamed Shaafici ayaa caawa aad ugu dheeraaday “Muhiimada Cilmiga iyo Culimada”. Fadliga cilmigu leeyahay inuu yahay Sharaf xataa qofka aan cilmiga lahayn jecelyahay inuu sheegto. Sidoo kale Sh. Maxamed Shaafici ayaa aad ugu dheeraaday fadiilada iyo wanaaga ahlul cilmigu...
Mutamarkii Assunnah isamic centre ee Aug 14, 200
Waxaa la ogeysiinayaa dhamaan Jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalka UK iyo nawaaxigeeda in la qaban doono Mutamarkii Assunnah isamic centre ee 14-16aug.2009 WAXAA KA MID AH CULIMADA KA SOO QAYB GALEYSA: 1: Sh. C/Qaadir Cukaashe Nairobi 2: Sh. Axmed Maxamuud (Axmed Yare) U.k 3: Sh. Maxamed Cbadi Daahir U.K 4: Sh. Daahir Cabdi Xuseen U.K 5: Sh. C/qaadir Sh.Maxamud Mire Holland 6:...
Halkudheg: mu'atamar, muxaadaro